Mari yakavimbiswa iri yakanaka zano rekudyara? | Ehupfumi Zvemari
Mari dzinovimbiswa dzadzokazve imwe yeanopokana eiyo mari yemari. Mushure memakore mazhinji kukanganikwa nechikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Hazvishamise, nekudaro, kuti mamaneja emari akatendeukira kune aya akasarudzika zvigadzirwa zvemari. Kusvika padanho rekuti ikozvino kupihwa kwemari yekudyara kunosanganisira dzakasiyana siyana nyowani inovimbiswa. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri muchinzvimbo chekuwedzera zvaunotarisira maererano nehuwandu hwezvikumbiro zvaunogona kunyorera kubva zvino zvichienda mberi.
Kana yakavimbiswa mari yekudyara inoratidzwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti vanokuvimbisa iwe a shoma mari makore ose. Kusiyana nedzimwe mari dzinotarisana nemamiriro emisika yemari. Chero inoshanduka kana yakagadziriswa mari kana kubva kune mamwe mamodheru. Neakavimbiswa iwe hauzove nekurasikirwa mune yako mareti statement. Kunyangwe chiri chokwadi kuti kudzoka kwaunogona kuwana hakunakidze seizvo zvinogadzirwa kubva kune yakawanda kana shoma mari yechinyakare. Ichi chinhu chisingafanirwe kuenda chisingazivikanwe chero nguva.
Nekuti mari yakavimbiswa iri, sekuratidzwa kwezita ravo, ese iwo anovimbisa, akazara kana muchidimbu, mari yakadyarwa. Asi nguva dzose nehuremu hwepakati nepakati purofiti iyo yakatemerwa kwenguva yakati rebei kana shoma. Mupfungwa iyi, kufarira kunogadzirwa nekirasi iyi yezvigadzirwa kunofamba munzvimbo dzinoenda 2% uye kusvika 5% anenge. Izvo zvinoitirwa chimiro chakanyatso tsanangudzwa mushandisi. Vanochengetedza varimi, vane chishuwo chekuchengetedza yavo capital uye vasingade zvakanyanyisa njodzi kune yavo mari.
1 Yakavimbiswa: zuva rekupera
2 Mhando dzemari dzinovimbiswa
3 Ivo havape zvizere zvinovimbisa
4 Makomisheni epamusoro
5 Gadzira bhegi rekuchengetedza rakatsiga
6 Chii chaunofanira kuchengeta mupfungwa?
Yakavimbiswa: zuva rekupera
Kana paine hunhu humwe hunotsanangura izvi zvigadzirwa zvemari zvakanyatsonaka, ndezvekuti zvine zuva rekupera. Nekuti mukuita, iwe unongozadzisa zvinangwa zvinoteedzerwa kana iwe ukachengeta mari mukati menguva yakatarwa. Iko hakuna misi yakatarwa asi kazhinji inotenderera mukati menguva dziri pakati pemakore maviri kusvika mashanu. Iko kunenge kuchidikanwa kuti iwe uve ne immobilized mari. Kusiyana nedzimwe mari dzekudyara uko iwe uine zvakawanda zvakachinjika kupedzisa mashandiro. Chinhu icho mune dzinovimbiswa hachiitike pasi pechinhu chipi zvacho.
Ivo vakavimbiswa, kune rumwe rutivi, vane mune dzimwe nguva mamwe emari windows. Naiwo mazuva akafanotemerwa akasimbiswa, maari anenge achikwikwidza anogona kubhadhara zvakakwana kana zvishoma pasina kubhadhara kubhadhara komisheni. Kunyangwe isingawanzo kukanganisa kudzikunurwa kwakasarudzika kana kwakazara, sekune rimwe divi izvo zvinoitika neyakaiswa mari. Iyo poindi ndeyekusvika kumagumo kuti uwane kubatsirwa kwekushanda. Pakupera kwezuva chimwe chezvinangwa zvemumwe mudiki uye wepakati investor.
Sezvo mune imwe mari yekudyara, iwe uine pamberi pako huwandu hwakawanda hwenzvimbo dzekudyara. Kufanana nekugutsa chero kudiwa pane chikamu chevanonyanya kuda saver. Ehezve, imwe yeinobatsira kwazvo ndeavo vanobva ku fixed income. Mune ino kesi ivo vanonyanya kusarudzika nekuti pazuva rekupera kwevimbiso ivo havangovimbise chete kuchengetedza kwekutanga capital, asiwo yakatarwa uye yakafanorongedzwa kudzoka. Icho chidiki chidiki icho chaunofanirwa kufunga nezvacho kubva zvino zvichienda mberi.
Imwe yemafomati inouya kubva kuequities, kunyangwe ichipa akateedzana mutsauko zvine chekuita neyakambochengetedza modhi. Iyo inogara mukuti ivo vanongochengetedza chete kutanga kwekudyara, pazuva rekupera kweiyo garandi. Nekudaro, ivo vanotendera kuti vawane purofiti zvichibva pamari yemari kune izvo zvigadzirwa zvemari zvakabatana. Kwete pasi peyakagadziriswa muzana, asi zvinopesana, zvinoenderana nekushanduka kwemakambani emari akanganisa. Chero zvazvingaitika, iri fomu ine hukasha zvakanyanya maererano nesarudzo yemabasa akaitwa.
Ivo havape zvizere zvinovimbisa
Mukati meichi chiitiko, haugone kukanganwa chero nguva iyo, kazhinji, idzi mari dzekudyara havavimbise kudyara nguva dzose. Panzvimbo iyoyo, pasi peimwe sarudzo yakatarwa inoenderana nekuremekedza zuva iri zuva rekupera kwevimbiso. Mupfungwa iyi, ivo vakaita senge nguva yekubhangi dhipoziti kupfuura yakawanda yechinyakare mari yekudyara. Hazvishamise kuti mari idzi zvimwe zvigadzirwa zvemari zvisina kunakidzwa nekuvimba kwemisika kwenguva yakareba.
Kune rimwe divi, zvakakosha kuti iwe uongorore mazuva ekupera uye mamiriro echibvumirano. Saka kuti kusanzwisisana hakugone kumuka izvo zvinogona kutungamira kune isingadiwe mamiriro kune ako mafariro. Kusvika padanho rekuti iwe unofanira kuvanyorera ne ruzivo rwakakwana kune yako chikamu. Nekuti maumbirwo ayo nemakanika ari kure kure nemimwe mari yekudyara. Izvo zvinogona kutaurwa pasina kutya kwekukanganisa kuti avo vakavimbiswa vanoumba boka idzva mukati memari yekudyara.
Iwe zvakare uchafanirwa kuona yakanyanya kusarongeka maficha mukuhaya kwavo. Kubva pane ino maonero, makomisheni akasimba anotungamira kune chimwe chezvipingamupinyi zvakanyanya pakubhadhara. Kunyanya sezvo iyi fizi inowedzera kuwedzera kune kunyoreswa uye kudzoreredzwa panguva yewarandi nguva. Hazvishamise kuti, chimwe chezvikonzero zve kuranga kupinda Mari idzi dzinonyanya kukonzerwa nenyaya yekuti maneja anoda kudzikisira kupinda kune zvinopinda nekubuda kwevatori vechikamu, asiwo zvemari.
Kugadziriswa kwayo kunoda mipiro mikuru yemari uye iyo inogona kusvika kusvika ku3% mune mamwe mafomati akagadzirwa nemaneja. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei pakupedzisira vanogona kukunyadzisa kubva kune aya akasarudzika mari yekudyara yatiri kutaura nezvayo. Pane rimwe divi, mari yekuchengetedza zvakangofanana nechero mari yekudyara. Icho chinhu icho iwe chaunofanira kutaurira kubva pakutanga kuti udzivise zvisinganzwisisike zveminiti yekupedzisira kushamisika.
Gadzira bhegi rekuchengetedza rakatsiga
Iyi kirasi yezvigadzirwa zvemari zvakagadzirirwa zvakanyanya kuchengetedza bhegi rekuchengetedza iyo yepakati uye yakareba. Chimwe chezvikonzero ndechekuti guta rako riri kukura zvishoma nezvishoma makore ose. Zvishoma nezvishoma asi zvakare ichisimbisa yekutanga capital. Kunyangwe zvese zvichizoenderana nemhando yamasarudza. Ndokunge, kana iri mari inoshanduka kana kana iyo inopesana yakavakirwa pamari yakatarwa. Chero zvazvingaitika, hapazove nehurongwa hwekudyara hunofungidzira mune zvakasikwa. Semuenzaniso, zvinoitika nezvimwe zvigadzirwa zvine hunhu hwakafanana. Uku kudyara kuri pachena uye kwakananga kwausingazokwanise kuve mamioneya neimwe nzira.
Ndivo vanodzivirira zvakanyanya kana vanochengetedza vanochengetedza avo vanonyanya kusarudza aya mamodheru emaneja. Kupi kuchengeteka kunokurira pamusoro pekubatsira iwe kwaunogona kuwana. Iko kune njodzi dzinodzorwa zvakakwana kuitira kuti iwe usarasikirwe nemipiro yako yemari. Chinhu chisingaitike mune mamwe marudzi emari yekudyara. Ichi chichava chimwe chezvinhu zvaunofanira kufunga nezvacho kana uchifunga nezvekupinda munzvimbo dzavo. Pamusoro pehumwe hunyanzvi hwekufunga uye kunyangwe kubva pakakosha maonero.
Chii chaunofanira kuchengeta mupfungwa?
Kana iwe uchida kunyorera kune chero yeakavimbiswa mari yekudyara yakashambadzirwa nemakambani manejimendi, zvichave zviri nyore kwazvo kuti iwe uende kune imwe yeanotevera mitsara yekuita yatinofumura pazasi.
Kazhinji kirasi iyi yezvigadzirwa zvekudyara inongovimbisa kudyara mu zuva rekubuda.
Inokurudzirwa zvakanyanya kuti iwe utarise kana iyo yakasarudzwa modhi ine yakagadziriswa uye yakachengeteka purofiti uye pasi pemamiriro api. Zvichava zvakakosha kudzivisa kushamisika kusingafadzi.
Iwe unofanirwa kuibhadhara pasi pe nguva yekutengesa kwayo nekuti haugone kusiyanisa mamiriro avo.
Fungisisa zvimwe mamwe makomisheni akawedzera izvo zvingangoda kuedza kukuru kwemari kupfuura kuburikidza nedzimwe mari dzekudyara.
ari kudzosera mari kuitwa hakuzokwanise kubatsirwa kubva kuvimbiso idzo kirasi yezvinhu zvine zvigadzirwa.
Ivo vane kupihwa kuri kuve kuwedzera mumwedzi ichangopfuura semhedzisiro yekufarira kukuru kune chikamu chevashambadzi vadiki nepakati.
Dzakavimbiswa, neimwe nzira, chigadzirwa chinonyanya kufanana ne zvigadzirwa zvemari yakatarwa kupfuura izvo zvakanyatsobatanidzwa kune misika yemari.
Mushure mekuongorora chigadzirwa chemari ichi, unenge uri pachinzvimbo chiri nani chekuratidza kana zviri nyore kwauri kuti uzviite panguva iyoyo. Kune rimwe divi, hauzove nesarudzo kunze kwekutarisa kuti chii chimiro chezvekudyara chauri kuratidza. Kuti uone kana kuhaya kwako kuchakubatsira iwe kubva ikozvino zvichienda mberi. Sarudzo inoenderana nemhando dzakasiyana uye kwete zvese zvine hukama nemamiriro eakaundi yako yazvino. Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kutora danho neruzivo rwakawanda sezvazvinogona. Saka kuti nenzira iyi iwe uite mashoma mashoma sezvinobvira. Ichave imwe yedzakanakisa nzira dzekuti uchengetedze capital yako kubva kuiyi chaiyo nguva. Iwe unoda here kuvashandira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Mari yakavimbiswa iri yakanaka zano rekudyara?
Chii chinonzi TIN kana Chizita Chidhara Chekuda